ဘဝမှတ်တိုင်: Goolge Play Store မှ APK တွေကို ဘာဆော့ဝဲမှ မလိုပဲ ကွန်ပျူတာကနေ အလွယ်တကူဒေါင်းမယ်
Goolge Play Store မှ APK တွေကို ဘာဆော့ဝဲမှ မလိုပဲ ကွန်ပျူတာကနေ အလွယ်တကူဒေါင်းမယ်
ဟိုးအရင်တုန်းက playstore ကနေပြီး ကွန်ပျူတာကို တိုက်ရိုက်ဒေါင်းဖို့နည်းလမ်းတွေက အရမ်းခဲယဉ်းပါတယ် ကြာလာတော့လည်းအဲနည်းလမ်းတွေက မရပြန်ပါဘူး ။ မကြာခင်က ဆော့ဝဲ လေးတစ်ခုနဲ့ အလွယ်တကူဒေါင်းလို့ရလာပြန်ရော ။ ဟော အခုတော့
အရမ်းလွယ်တဲ့ နည်းလမ်းလေး ဖြစ်လာပြီ ။
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ မိမိတဲ့ လိုချင်တဲ့ app ရဲ့ play store လင့်ကို ကော်ပီကူးပြီး http://apps.evozi.com/apk-downloader/ ကိုသွားလိုက်ပါ။ URL အကွက် မှာ paste လုပ်ကာ Generate download link ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ခဏစောင့်ပေးရပါမယ် တစ်ခါတစ်ရံ ၅ မိနစ်လောက်စောင့်ပေးရပါမယ်တဲ့ ။ ပြီးရင်တော့ Click here to download ကိုသာ နှိပ်လိုက်ပါ။
အောက်မှာ နမူနာအနေနဲ့ ကျွန်တော် Air call accept လေးကို ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ
မှတ်ချက် app တစ်ခုကို တစ်ကြိမ်ပဲ ဒေါင်းခွင့်ပြုပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒေါင်းနည်းများမသိပါက ဒီမှာ သွားကြည့်ပေးပါခင်ဗျ
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 11/17/2013 09:03:00 pm
MM Ringtone Collection (Andriod ဖုန်းအတွက် မြန်မာ ...
Carrier Changer (Root) For Android
Photoshop စတင်လေ့လာသူများအတွက် လေ့လာသင်ယူဖို့ နည်း...
Facebook APK 5.0.0.0.6 (Latest Version)
Facebook မှာ သီးသန့် Chat ချင်သူများအတွက် - Facebo...
DW Contacts & Phone & Dialer v2.5.8.1 Pro APK
ရယ်ချင်စရာရုပ်ပြောင်လေးတွေလုပ်ပေးမယ့် fun face swa...
မြန်မာကိုချစ်တဲ့မြန်မာ Android User များအတွက်
တခြားshareတွေထက်သာတယ်ဆိုတဲ့Any share apkလေး
:Whistle phone locator pro v4.5 APK
Iphone စတိုင် keyboard ကို သုံးမလား iOS7Keyboard...
100% အဆင်ပြေတဲ့ အသစ်ထွက် IDM 7.1 (Patch မလိုပါ)
Wondershare MobileGo for Android 4.1.1.6 + Patch (...
Samsung Zawgyi Enabler လို့ခေါ်တဲ့ Android
ကျွန်တော်သာ သမ္မတကြီးဖြစ်ခဲ့ရင် အပြည့်အစုံ။
MPT Service v.1.1 APK -Offline Service-(For Androi...
★ facebook offical v4.0.0.0.2★
ဗလရှိဖို့ မလိုပါဘူး …. “ဇ”ရှိဖို့ ပဲ လိုတယ်
Pro Myanmar Root App
အားလုံးသိပြီးနေတဲ့ မြန်မာစာ လုံးဝမှန်စေမယ့် Fepfz ...
ZawGyi Font Changer (Andriod Vresion 4.0 အထက် ကနေ ...
မြန်မာ SMS(message) apk for Android
အိမ်ဒီဇိုင်း ပန်းအလှ ဒီဇိုင်းဝါသနာရှင်များအတွက် ရေ...
Nero7Premium 7.11.10.0 + Serial (Full Version)
SAYTYA - Free Calls and Chats (Andriod ဖုန်းမှာ Fa...
Ubutu (Linux) မှာ မြန်မာဖေါင့်သွင်းနည်းစာအုပ် (မြန...
Photo Collage Max v2.2.4.6 For Pc 35MB
Note III Update 30.10.2013 အသစ်ထွက် N9005XXUDMJ7...
Tango latest version v 3.2.67659 for (latest versi...
DLL Suite 2013.0.0.2067 (15.93 Mb) For Xp 7
ဖုန်းထဲမှာရှိထားသင့်တဲ့ အလန်းဇယား မြန်မာ Ringtones...
3D Parallax Background Live Wallpaper v1.16 APK
Huawei C8813 မှာ ၁၅၀၀ MEC SIM Card မသိတော့တဲ့ Erro...
SMS Backup & Restore Pro v6.41 APK (Full version) ...
FB Downloader v.1.3 APK (Facebook ပေါ်မှ ပုံ၊ ဗီဒီယ...
ProMyanKey လို့ ခေါ်တဲ့ မြန်မာကီးဘုတ် ဗားရှင်းအသစ်ထ...
Memory Washer v.7.1.0 (ကွန်ပြူတာ ကို မြန်ဆန်သွက်လ...
Window တင်နည်းစာအုပ်ကို စုစည်းပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
Mobile Diectory ကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Brilliant Di...
Ifont မှာ မြန်မာစာပါ ပါဝင်လာပြီ
Simple Mp3 Download လေး နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
ANDROID ဖုန်းနဲ့ စကားပြောကြည့်ရအောင်
Note24G သမားများဝမ်းမြောက်ဖွယ်..... Official 4.3...
AndroZip™ Pro File Manager v4.6.8 APK
Huawei သမားများအတွက် (HiSuite v1.8.10.2006)
အနက်ရောင် THEME ခပ်မိုက်မိုက်ကြိုက်သူများအတွက်
Note III အတွက် CWM Recovery version အသစ်ထွက်ပါတယ် ...
Easy Unrar Unzip & zip premium v2.9 Apk 1MB
jetAudio Music Player Plus v3.6.0 APK
Andriod Version 2.2 အထက်တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Ad...
< **Update 30.10.2013 အသစ်ထွက်N9005XXUDMJ7 လင့်ကို...
♥SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9500,.ကို ROOT လုပ်နည်း
My Apks Pro For Android
Copy Protected လုပ်ထားတဲ့ DVD တွေကို copy ကူးလို့ရ...
ဂိမ်းလေးထပ်တိုးလာတဲ့ Talking Tom2v4.1 Apk
AutoCad 2005 အသုံးပြုနည်း (မြန်မာလို)
Android Jelly Bean v4.1.2 တွေမှာမြန်မာစာ 100% မှန်...
ဘီအီးဒီအောင်သိုက် ရဲ့ဇတ်လမ်း တိတ်ခွေများစုစည်းမှ...
နောက်ဆုံးရ သိပ်ကို အသုံးဝင်တဲ့ ကလိဝဲလေးတွေပါ
frozen keyboard အလန်းလေးများ
ခန္ဒီစေတီ v.1.0 APK
အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေကိုအသံထွက်ပေးမယ့် Using Audio from...
Rootဖောက်၊ မြန်မာစာထည့်၊ မြန်မာဖောင့်မှန်၊ IMEI ပြ...
Learns Korea Koreanbuilder ( for Android )
WinRAR 5.01 Beta 1 Full
ဓါတ်ပုံတွေပြင်မှာလား video တွေ ပြင်မှာလားအရည်အသွေး...
Android ဖုန်းတိုင်းမှာ ရှိထား ဆောင်ထားသင့်တဲ့ RAM ...
Viber User များအတွက် Sticker အသစ်များ - Viber Stic...
Your Uninstaller! Pro 7.5.2013.02 + Serial Key
USB ကြိုးမလိုတဲ့ Computer နဲ့ Android ဖုန်းကြား Da...
Google Play ကို ဝင်တဲ့အခါမှာ Loading လုပ်တာကြာတယ် ...
ဗွီဒီယိုတွေမှာ Watermark logo လေးတွေလုပ်ကြမယ်
WinX DVD Ripper Platinum v7.3.3- with Key (Full ve...
ဓါတ်ပုံကိုခဲခြစ်ပန်းချီ အဖြစ်ဖန်တီးပေးမယ့် - XnSke...
Password/Pin/Pattern Lock ကိုကလစ်တစ်ချက်နဲ့ဖြုတ်ပေ...